Imvelo olunothile zensimu Belarusian, amanzi sengiprofethile, izinyoni ngitshiyoza - yilokhu kanye kungabonwa ngokuvakashela echibini Selyava. amatende Phumula ukukhuthalele esichumayo. Futhi kulabo ungafuni ahlukane izimo evamile ukhululekile ahlinzekwa ukuba bazohlala izigodi. Le ndawo igcwele izakhi KweNkathi Ephakathi, onikeza ke ikhubalo ekhethekile. Imvelo kuyinto enhle nje kuphela kodwa futhi imvelo. Ukuze zihambele echibini, zezihambeli ziyafika lapha emhlabeni wonke. Lezi zindawo uyonika injabulo, kwangaphakathi, futhi, okubaluleke kakhulu, ngoba ngamaholide , ungakwazi ukwenza ngcono impilo yakho.
Indawo yemvelo izici
Lake Selyava izithombe ongawabona esihlokweni, itholakala enyakatho-mpumalanga Belarus, Krupki esifundeni Minsk esifundeni. Kuyinto uketshezi, igqugquzelwa emifuleni kanye Rakitovka okusezingeni eliphezulu nekungenelela isiteshi ububanzi nge Nentukuthelo echibini. Selyava ingenye amachibi amahle futhi makhulu kunawo wonke Belarus, endaweni yaso 15 amakhilomitha square, ukujula (lesishiyagalolunye ngobukhulu by umthamo wamanzi!) - 19 amamitha. Phansi echibini embozwe isihlabathi exutshwe encane amatshe emfuleni, kodwa kukhona inhlabathi daka. iziqhingi ezintathu etholakala maphakathi echibini. Coast endaweni embossed, yakha inani elikhulu amatheku, nemifula kanye headlands. Shores ziphansi ikakhulukazi amaxhaphozi, nasenyakatho, naseningizimu amagquma embozwe izihlahla kanye Polesie ezingavamile. Amanzi echibini Bright ku obala ehlobo idlula ngamamitha amabili.
Selyava ahlanzekile ebusweni echibini lamanzi ihlukile, engakhuli ulwelwe kanye duckweed. Ngasogwini ungathola mhlanga emahlozini, nemihlanga sedge, e amatheku futhi creeks - iminduze ophuzi, ifulege amnandi nojeke. Kusukela ngo-1993, i-Reserve State yasungulwa ngesisekelo echibini, okuyinto izinhlobo kuka-40 izilwane, ezifana izimbila, izimpisi, onogwaja, amabhere, kanye nabamele 100 zezinyoni, Waterfowl futhi ihlathi ekhaya. On the chibi bathole indawo izindwandwe zabo, snipe, goose zasendle kanye amadada, Cranes. Esikhathini Burrows ugu atholakala muskrat, ama-beaver awakha amadamu.
Emkhakheni echibini bathole izitshalo ezingavamile ezisohlwini Red Book of the Republic of Belarus. Indawo ezungezile amumethe amakhowe - chanterelles, boletus, boletus, boletus, ubisi amakhowe, boletus, amakhowe. Ngokuvamile kukhona izindawo berry (aluhlaza okwesibhakabhaka, ama-raspberry, cranberry, currants).
Yinganekwane Noma Yiqiniso?
Mayelana Lake Selyava bendawo ukutshela legend: ukuthi Agasti 28, 1942 echibini ihlaselwe kundiza American Pe-8, ebithwele ebhodini UK amathani amane egolide. Cishe, lokhu kuyinto nje inganekwane, inganekwane izivakashi, njengoba umzimba yamanzi akuyona ngokujulile ngakho ukuthi wahluleka uhlole zabo ezitholwe abatshuzi. Nokho, le nganekwane iyindawo ukuba.
Kungani echibini ngokuthi "Selyava"? Kwenzani lokhu izwi ukuthini? Kunemibono ezimbili.
Ngokusho inguqulo yokuqala, ichibi lethiwa sibonga umthengisi Selyavichey ubudala possessed amapheshana enkulu ezweni, okuyinto wawa echibini. Le nguqulo yesibili ithi igama layo ithole agcina izinhlanzi - whitefish, okuyinto in inqwaba kuyo amanzi alo. Belarusians basibiza ngokuthi "yisikhathi Selyava".
Lake Selyava ngaphandle vendace, ngokucebile namanje-15 zezintaka izinhlanzi: Rudd, carp crucian, Pike, bream, isiphika, gudgeon, perch, roach, eyikati, bream esiliva, spikes, burbot, ongenathemba, tench kanye ide. indawo Prikormleny Ngakho-ke, igama elithi Australia, okuhlabayo esihle imele ngasiphi isikhathi sonyaka.
ukudoba Imali ihlelwe abathandi lokudoba. Ukuze kube lula, echibini ifakwe inani elikhulu amabhuloho futhi zinsika, okuyindawo kuyoba elula ikakhulukazi ukudoba Wabasaqalayo.
Aphumula ngosuku lwayo echibini Selyava
Emaphandleni emangalisa futhi emoyeni enempilo Selyava echibini ukwenza kube yinto enhle kakhulu iholidi. Ikakhulukazi izivakashi eyakhelwe farmsteads - ngokhuni ezimbili storey izindlu, eyenzelwe abantu abayisishiyagalombili kwabayishumi. amakamelo Ukuhlala anemisila iziko kanye stereo uhlelo yesimanje. Esitezi kukhona ekhishini ngokugcwele, kanti owesibili - lokulala enombono obumangalisayo echibini ebusweni. On endaweni landscaped elise yokupaka yangasese futhi endaweni aziphumulele nge Gazebo, izoso futhi sandpit.
Lake Selyava (ngezansi), noma kunalokho ezizungezile, futhi ngokuvamile limbozwa emadolobheni etendeni. Ngakho uma umthandi iholide zasendle ke lokhu coast - ukukhetha ephelele. Ubukhulu BoMbuso indawo elisogwini Lake Selyava mayelana 45 amakhilomitha, ngakho kukhona esanele ukuze yonke comers. On echibini adalwe ejensi sokuqasha: catamarans, izikebhe, zokudoba, amabhayisikili nezinye izinto izivakashi. Kukhona i-volleyball ne-football zokudlala, gazebos.
Lake Selyava - kanjani lapho?
Sizonikela ongakhetha eziningana indlela ukuya ichibi elihle.
Ngu isitimela noma ibhasi esuka Minsk ngomuzi Krupki. Ngokulandelayo, amakhilomitha ambalwa ukufinyelela ngezinyawo noma ngokushayela itekisi. Ngaphambi kokuhamba kubalulekile ukucacisa lwezikhathi.
Oda ukudluliswa. Umhlangano esikhumulweni sezindiza, ngesikhathi isitimela noma ibhasi. Kufanele uxoxe kusengaphambili sokufika usuku, isikhathi kanye nezindleko zokuhamba.
Ngemoto yangasese. Emgwaqeni omkhulu Brest-Moscow (M1) ukuya edolobheni Krupki pointer. Jikela ngakwesokudla, hamba nizungeze Krupski ngomzana, shayela ku Krupki. Ukugxila uphawu "40", ukukhuphuka amagquma jikela kwesokunxele lapho kuqubuka "Proshika 19". Bese uya km 19 emgwaqeni omkhulu. Emnyango emzaneni Proshika uholwe izimpawu.
Noma kungenza kube lula: faka ikheli le-e itilosi bese ulandela imiyalo. Kodwa izimpawu awazange asinakekele.
Uhambo lokuya nokubuya echibini Selyava - ithuba elikhulu bajwayelane acwebile ubunjalo Belarus, uphumule ingqondo yakho, ngcono impilo yakho futhi uthole catch uyakufanelekela wokwenama!